एकै पटक दुईवटा कण्डम लगाउन सकिन्छ ? | शुभयुग
एकै पटक दुईवटा कण्डम लगाउन सकिन्छ ?
शुभयुग संवाददाताप्रकाशित मिति: २०७७ कार्तिक १३, बिहिबार (१ साल अघि)
एकै पटक दुईवटा कण्डम लगाउन सकिन्छ ? कण्डम ती जोडीको लागि बरदान नै हो जो सेक्सको मज्जाको साथै सुरक्षाको अनुभव पनि गर्न चाहन्छन्।
यो पनि नबिर्सौ कि कण्डमले नचाहेको गर्भ रहन दिदैन साथै यौनरोगहरु बाट पनि बचाउँछ।तर कण्डम प्रयोग गर्न केही जानकारी भएको भने हुनु पर्छ।
कण्डम प्रयोग गर्न नजान्दा लाजमर्दो स्थिति पनि सृजित हुन सक्छ। राम्रो संग लगाउन नजान्दा यसको प्रभाव पनि भनेको जस्तो नहुन सक्छ, जसको कारण यसले गर्ने फाइदामा पनि कमी आउन सक्छ। मानिसहरुमा यसको प्रयोगको बारै दुवैखाले धारणा पाइने गर्दछ।
कसैलाइ यसको प्रयोग पश्चात धेरै खुसी मिल्ने हुन्छ भने कसैलाइ व्यर्थको झन्झट लाग्ने हुन्छ। तर यसो भन्दैमा कण्डमको उपयोगिता तथा फाइदाहरुलाइ बिर्सन मिल्दैन।
कण्डमसँग सम्बन्धित केहि कुरा उल्लेख गरिएको छ हेरौं ।
-सम्भोग गर्दा हरेक पटक सहि तरिकाले कण्डमको प्रयोग गरेमा मात्र यसले अनिच्छित गर्भधारण हुनबाट बचाउँछ । कण्डमको उचित प्रयोग गर्नाले यौनरोग तथा एच.आई.भि एड्स सर्नबाट पनि बचाउँछ ।
प्रयोग गरिसकेको कण्डमलाई माटो मुनि गाड्न वा जलाउनु पर्छ । कण्डम मात्र त्यस्तो एक साधन हो, जसले यौन रोग एच.आई.भि बाट सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
१. के कण्डम यौन सम्पर्कका बेला फुस्कीएर महिलाको योनी वा पाठेघरमा भित्र पस्छ ?
२. कण्डम गर्भ रोक्नका लागि कतिको प्रभावकारी छ र?
४. के कण्डमले उत्तेजित लिङ्गलाई कसेर राख्ने हँदा वीर्य स्खलन चाडैँ हुन्छ ?